को बन्दैछ अर्थमन्त्री : पौडेल की पाण्डे ? खुल्यो वास्तविकता « Ok Janata Newsportal
को बन्दैछ अर्थमन्त्री : पौडेल की पाण्डे ? खुल्यो वास्तविकता
काठमाडौं । प्रधामनन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा पर्याप्त छलफल गरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारी गरेसँगै नेकपाका नेताहरुले मन्त्रीको सपना बुन्न थालेको करिब एक महिना बढी पुगेको छ । मन्त्री बन्नका लागि तलदेखि माथिल्लो तहसम्मका नेताहरुको दौडधुप कायम छ ।
आफ्नो क्षमताले नभ्याउनेसम्मका गास हाल्न तयार नेतादेखि क्षमतावान नेताबीच पनि मन्त्रालयको बाँडफाँडमा असहमति हुनेसम्मका क्रियाकलाप चलिरहेका छन् । आफूले इच्छाइएको मन्त्रालय पाउने दौडधुपदेखि मन्त्रीबाट पछाडि हट्नेसम्मका विषयले यतिबेला नेकपाको राजनीतिक वृत्त तातेको छ ।
शक्ति र पैसाको आडमा मन्त्रीको सपना बुन्नेदेखि जनताको सेवामा निष्ठापूर्वक लाग्नेसम्मका नेताहरुको अहिले निदहराम भएको छ । कामका आधारमा र क्षमताका आधारमा मन्त्री पाउनुपर्नेका लागि पैसा र चाकडी बाधक बन्ने खतरा बढ्दै गएको छ ।
यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा दुई शीर्ष नेताको दाबीका कारण पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा ढिलाइ भइरहेको बताइन्छ । अर्थमन्त्रालयका लागि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल र नेता सुरेन्द्र पाण्डेको नाम चर्चामा छ । दुवै नेताले यसअघि पनि अर्थको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
बिष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्रीमा अगाडि सार्ने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारीमा पाण्डेको असहमतिले समस्या सिजर्ना गरेको छ । अर्थमन्त्रीका लागि दुवैजना उत्तिकै अब्बल मानिन्छन् ।